Warbixin: Wax Waliba Oo Aad Kaga Baahan Tahay Final-ka UCL, Real Vs Juve » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Champions League/Warbixin: Wax Waliba Oo Aad Kaga Baahan Tahay Final-ka UCL, Real Vs Juve
Warbixin: Wax Waliba Oo Aad Kaga Baahan Tahay Final-ka UCL, Real Vs Juve
AbDi RaHmAn AdAnI, Reporter June 3, 2017
Kooxaha Real Madrid Iyo Juventus ayaa waxa ay caawa Magaalladda Cardiff ee wadanka Wales ay ku dheeli doonan Final-ka Koobka koowaad ee ugu xiisaha badan qaaradda Yurub ee Champions League.
Kulankaan ayaa waxa uu yahay mid aad uxiiso badan, waxaana Labadda Kooxood laga filayaa inay soo bandhigaan kubad aad ay ugu riyaaqaan Taageerayaasha iyo cid waliba oo ka qeybgaleysa Final-kan.
Maamulaha Juvetus Max Allegri ayaa waxa uu wajahayaa Kooxda Real Madrid isaoo aanan qabin wax dhaawac ah, waxaana ay ka dhisan tahay inuu doonayo inuu guul kasoo qaato Magaaladda Cadriff.
Sidoo kale, Allegri ayaa waxa macquul ah in mid kood shaxaha kala ah 4-2-3-1 ama 3-4-2-1, uu dheello taas oo uu filayo I tan markii ciyaarta soo dhamaato ay ku joojin karaa Xididgaha waa weyn ee Los Blancos.
Qiimaha sarre ee uu lee yahay Xiddiga Isco, kaas o xagagaan ku guuleystay Laacibka sanadka ee Real, waxaana uu Zinedine Zidane uu si cad usheegay in dooqiisa koowaad uu yahay Gareth Bale.
Ciyaaryahan Daniel Carvajal ayaa waxa uu kusoo biilan doonaa safkaan, waxaase kooxda ay weyn doontaa sida ay wararku sheegayaan Xiddigaha kala h Pepe iyo Fabio Contaro, kuwaas oo dhaawac ku sheeegaya.
Ma ogtahay mise losocotaa in Finalkaan uu yahay midkii 13-aad ee Taariikhda kaga dheello Koobkan aadka loo darariyo.
Ma ohtahay in Final-ka Koobkaan lagu qabanayo Magaaladda Cardiff wax ka badan Siddex, hore loogu soo dheelay kuw kale.
Ma ogthaya in Mushkilada ugu weyn oo ay qabaan a qeybgalayaasha Kulankaan ay tahay baqdin xagga Amniga ah.
Mo ogtahay in Xiddig ka tirsan Real Madrid lagu dheelayo Hoygiisa ama Wadankiisa, uuna yahay Gareth Bale.
Kooxaha Real Madrid Iyo Juventus ayaa waxa ay guud ahaan wada kulmeen 19 kulan, waxa ay dhamaantooda ka tirsanaayeen Koobaka laga dheelo Horyaaladda Yurub sida European Cup/Champions League.
Juventus iyo Real Madrid ayaa waxa waxa mid waliba guul sideed jeer waxa ay bareejo galeen Labo dhamaan Is aragooda Tartamadda oo idib – Is aragii ugu danbeeyay ee koobka waxa uu kusoo dhamaadya 1-0 oo Real lee dahay.
Real Madrid aya guulkaas waxa ay uga mahad celineysaa Xiddigoodii caanka ahaa ee lagu magacaabi jiray Predrag Mijatovic, ciyaar dhacday sagaashameyadii gaar ahaan sanadkii 1998-dii.
Real Madrid ayaa waxa ay ka dambeyska Final-ka kooban (European Cup/Champions League ) waxa ay gaartay 15 jeer, waxa ayna afar dheer taahy Kooxda (AC Milan oo dhankeeda gaadhay 11 jeer)
Dhamaan final-ladaas ay gaadhay Real waxa ay ku guuleystay 11 jeer, taas ii siineysa inay yihiin kooxda ugu badan ee qaaday Final-kaa, waxaana ay hadii ay caawa qado siisameyneysaa Taariikh Kale.
Juventus ayaa waxa ay ku guuleysatay labo kamid ah sideed jeer oo ay gaadhay ka danbeyska koobkan, waxaana kuwii laga qaaday ay kala ahaayeen ama ay dhaceen sanadii 1997, 1998, 2003 iyo 2015.
Real Madrid ayaa waxa ay dooneysaa inay noqoto kooxdii ugu horeysay ee diaacata koobkan tan iyo AC Milan oo sameysay sanadkii (1989, 1990), oo ay difaacata Koobka European Cup/Champions League.
Ugu danbeytii, Kooxda Real Madrid ee wadanka Spain ka socota ayaa Finalka Koobka ugu xiisaha badan Qaarada Yurub ayaa waxa ay gaadhay seddex jeer afartii xilli ciyaareed ee ugu danbeysay.
Safka Macquulka Ah
'Cidna Kama Baqeyno, Waxa Aan Udheeleynaa Dhalinyaro Oo Kale' Real Oo Hanjabaad Heleysa
Liverpool Tabaraheedka Klopp Oo Laga Soo Diiday Dalabka Xiddig Horey Ugu Soo Dheelay Blues